Yana Markova - အနာဂတ်ဦးထုပ်ကိုဖန်တီးရန် wizard ကို။ မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့သူမကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းဝတ်စုံတစ်ဦးစုဆောင်းမှုပေးအပ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှည်လူသိများတဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရာ၏ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ပြပွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းပုံမှန်မဟုတ်သောလမ်းနှင့်အတူ ပို. ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါ။
Yana Markova, Ekaterinburg ကနေပါရမီဒီဇိုင်နာ - သစ်ကိုခေတ်မှီနာမတျော၏ဖန်ဆင်းရှင်။ ဗိသုကာနှင့်ဇန်နဝါရီလ၏အနုပညာအကယ်ဒမီမှဘွဲ့ရပြီးနောက်သူမတစ်ဦးအဝတ်အစားကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Young ကဒီဇိုင်နာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့မတှေ့ခဲ့ပေ။ အဆိုပါအနုပညာရှင်ပုံရိပ်တွေကိုတီထွင်ပေမယ့်သီချင်းသူမ၏မပြီးဆုံးသေးသောပုံရသည်။ ထိုအခါမှ Ian သူတို့ရဲ့ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာ embodying, သူတို့ရဲ့မော်ဒယ်တွေပုံမှန်မဟုတ်သောဦးထုပ်ကိုစတင်ရန် dorisovyvat ။ ဒါဟာမကြာခင်မှာဝါသနာအလုပ်သို့ကူးပြောင်းကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ မှ Ian နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်လုံးဝအမြင့်ဆုံးဖက်ရှင်လောကီသားတို့သည်အဖို့လက်နက်ချတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောမမေ့နိုင်သောအတွက်ပုံတွေဖန်တီး။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကဂျွန်ကြော့ဆင်မြန်းခြင်းနှင့်ဖန်စီဦးထုပ်အတွက်အဆိုတော်တွေဆွဲငင်။ Couturier သူမ၏ပထမဦးဆုံးအနုပညာဆရာချုပ်ရန်သူမ၏သှနျသငျကြောငျးသို့နှစ်ပေါင်းဆဲသောသူသည်မိခင်, ဖွစျကွောငျးကိုဝန်ခံသည်။ ပထမဦးဆုံးဦးထုပ်အဖြစ်အားလုံးနောက်ဆက်တွဲသူတို့, လက်ဖြင့်ချုပ်ခံခဲ့ရသည်။ ယင်း၏သဘောပေါက်များအတွက်အနုပညာရှင်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလျှောက်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုရရှိရန်ခက်ခဲသည်, ဒါပေမယ့်တောင်မှထို့နောက်ကချစ်စရာကောင်းအနုပညာအရာဝတ္ထုဖြစ်ခဲ့သည်။
မှ Ian အနုပညာရှိရာလေထုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို headdress စီပုံရိပ် - ပုံ။ ပထမဦးစွာသူမအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံကြမ်းစေသည်။ အဘယ်သူမျှမနေရာအသေးစိတ်, ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်အတိအကျတွက်ချက်မှုရှိပါသည် - ကမကြာမီတအပိုင်းအစဖွဲ့စည်းမှုအထိတန်းစီတံ့သောအပျေါအခွခေံတစ်ခုအကြမ်းဖျင်းပါပဲ။
မိမိအလုပ်အတွက်ဇန်နဝါရီအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ဂိုဒေါင်အဆက်မပြတ်အနုပညာရှင်အထူးပြုပြပွဲမှာရှာဖွေနေကြောင်းသစ်ကိုပစ္စည်းများနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းသည်။ ကကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်ရှိသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရေးစပ်သီကုံးလဲမူရင်းပစ္စည်းများနှင့်အထည်တင်ပြအဖြစ်စာရေးသူကအမြဲအတိအကျ image ကိုလုပ်မထားဘူးကွဲပြားခြားနားသောကြည့်ရှုပါ။ ပန်းချီဆရာတစ်ဦးသစ်ကိုလက်ရာအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကူးယဉျ, စဉ်းစား, လေ့လာနေတဲ့မူကြမ်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ တစ်ခုတည်း image ကိုဖန်တီးရန်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်၏တစ်လခွဲအထိကြာနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းသည်သူ၏အလုပ် Ian ကစံပြမှဆောင်တတ်၏, သည်ပုံရိပ်ကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု, အချိန်နှင့်ငွေတစ်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုထည့်လေ့မရှိသောကွောငျ့, သူ့အစီအစဉ်ကိုထက်ဝက်လမ်းအရွက်ဘယ်တော့မှမ။
Yana Markova ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်မိစတိုင်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူမ၏ဦးထုပ်အခြေခံကျကျစိတ်ကူးလက်ရာမြောက်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်ပြောင်းပေးပါ။ ထွက်ပေါက်မှာကျနော်တို့က, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရန်လိုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒီဇိုင်နာပင်ခဏဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်မှုတ်သွင်းသူ၏ဦးခေါင်းကို Jana အဆက်မပြတ်အသစ်သောစိတ်ကူးများ, ။ အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်စိတ်ကူးစိတ်သန်း - သာက၎င်း၏အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။ တိုင်းအရာတစ်ခုတည်းမိတ္တူအတွက် created နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်စျေးကွက်အတွက်မသင့်တော်ဖြစ်ပါသည်: Yana Markova ထံမှပုံမှန်မဟုတ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းသာရုပ်ရှင်ရုံမှာရုပ်ရှင်ရုံဖြစ်နိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖက်ရှင်ရှိုးမှာကြည့်ပါ။
အနုပညာရှင်အဘို့ပစ္စည်းများခေတ်သစ်ပိတ်ထည်, သတ္တုပစ္စည်းများ, ပုတီး, swarovski ကျောက်ခဲတို့ကိုရွေးကောက်အဖြစ်။ အမိန့်မှလုပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုသွန်းလေ၏။ ယင်းဦးထုပ်တစ်ခုမှာငွေအဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသည် - အသေးစိတ်အတွက်လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်အမိန့်ချမှတ်ခံရဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကြယ်ပွင့်ဝယ်ယူ: စင်ပေါ်မှာ Yana Markova ပုံရိပ်တွေ
မှ Ian ပြပွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကြယ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ အဆိုပါထူးချွန်ဒီဇိုင်နာပုံရိပ်တွေများ၏အထင်ကြီးလေးစားများထဲတွင် - Lolita, အီဗာ Polna, Sedokova အန်နာသည် "GROUP လီနင်ဂရက်" Marina ကင် Alina Lanin, Irina Dubtsova နှင့်အခြားနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှမိန်းကလေးတစ်ဦး။ ဒီဇင်ဘာလ 2016 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးစွာ Channel ကိုကိန်းပွဲတော်မှာစိုးရိမ်ရကောင်းချီးခံသော "မာတာ Hari" ရိုက်ကူးပါလိမ့်မယ်။ ကခုန်မြင်ကွင်းများများအတွက်ဝတ်စုံနှင့်ဦးထုပ်ရုပ်ရှင် Jana Markova ဖန်တီးခဲ့သည်။
မကြာခင်မှာပဲဆရာယောဟနျသူမကအဓိကမီဒီယာကုမ္ပဏီထံမှအမိန့်ကိုလက်ခံရရှိဘယ်မှာဟောလိဝုဒ်မှဇာတ်စင် wear သူ့ရဲ့စုဆောင်းမှုယူပြီးခဲ့သည်။ အခုတော့ဥသုံ Yana Markova feature ကိုရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတဗီဒီယိုအသက်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မကြာမီဖန်သားပြင်ပေါ်သူတို့ကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်အပေါင်းတို့နှင့်ယင်း၏အသေးစိတျ၌ဤအလှအပနှင့်စကားရပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် Yana MARKOVA www.yanamarkova.com ဖြစ်နိုင်သော်ဆိုက်သို့မဟုတ် Instagram ကိုအနုပညာရှင် on ရဲ့အလုပ်နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်း။
ကက်သရင်း Belinsky by: ထောက်ပံ့ဓာတ်ပုံတွေ၏အာဘော်။
တစ်ဦး swimsuit အတွက် Emilia Clarke
မိတ်ကပ်မပါဘဲ Adriana Lima
အတ္ထုပ္ပတ္တိ Anastasia Volochkova
စတိုင် Evelina Khromchenko
Pamela Anderson ကမိတ်ကပ်မပါဘဲ
တစ်ဦး swimsuit အတွက်ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်
ဂျူလီယာရောဘတ်စ - အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဂျူလီယာ Parshuta - ဓာတ်ပုံ "လုပျသငျ"
ဂျစ် Bardot ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Kim Kardashian ကမိတ်ကပ်
လက်ပ်တော့ဖို့ router ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ခရစ်ဘရောင်းက Rihanna ရိုက်နှက်: "ငါသတ်သေကျူးလွန်ချင်ခဲ့တယ်"
ရက်သတ္တပတ်များကကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်၏သုံးလပတ် - စားပွဲ
Hypothyroidism နှင့်အတူအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကိုဘယ်လို - သိကောင်းစရာများ endocrinologist ဖြစ်သူ
စင်္ကြံထဲမှာဖိနပ်များအတွက်ဗီရို - ညာဘက်ရွေးချယ်မှုလုပ်ဖို့ဘယ်လို?
ပယင်း Heard တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတရား၏နောက်ကွယ်မှထံမှထုတ်လုပ်သူတရားစွဲဖြစ်ပါတယ်
ကမ္ဘာ၏အင်ပါယာအသိပညာ - function ကိုများနှင့်နည်းလမ်းများ
အဘယ်ကြောင့်ဘက်ခမ်းနှုတ်ခမ်းပေါ် ... သူတို့သားသမီးနမ်း?